SIDA LOO ABUURO PEAR GUGA: TALAABO TALAABO TALAABO AH - KU'SAABSAN
Goobidda waa marxaladda ugu muhiimsan ee beerashada pear.
Haddii la soo saaray si khaldan, ka dib goosashada wanaagsan wuxuu u qabsoomi doonaa muddo dheer, ama, si aad u macquul ah, waxaad filan kartaa wax goosan ah oo dhan.
Sida loo doorto waqtiga loo dego
Sidaa darteed, su'aasha ugu horreysa waxay ka timaaddaa ninkii beerta ka shaqaynayay oo doonaya inuu geed soo beero: goorma ayay ka fiican tahay in la gooyo pear guga? Gobollada koonfureed, arrintaan si fudud ayaa loo xalliyaa - waa faa'iido badan in la beero xilliga dayrta, maadaama ay adag tahay in la qaado xididada seedling xilliga kuleylka. Wixii gobollada waqooyi, wax waliba waa wax aan kala go 'lahayn: xilliga guga waxaa loo doortaa beerto, haddii kale xilliga jiilaalka dhirku wuxuu qaboojin doonaa oo dhiman doonaa.
Maxay sameeyaan dadka xaafadda deggan ee ku nool hareeraha dhexe? Halkan waxaan u baahannahay inaan si sax ah u miisaamo khibrada iyo khasaaraha. Waxaa intaa dheer, beeritaanka guga waa in aysan jirin baahi laga qabo in laga walwalo miraha macquulka ah. Inta lagu jiro xilliga xagaaga iyo dayrta, dhirta ayaa xoog u heleysa, waxay noqotaa mid xoog badan, waxaana u fududahay inuu ku noolaado xilliga qaboobaha ee hoyga gaarka ah. Si kastaba ha ahaatee, xilliga dayrta waxay ku faani karaan faa'iido kale: waqtigaan doorasho ballaadhan oo geedo ah ayaa la bixiyaa, iyo dhirta dayrta waa kuwo kale oo ay ku kala duwan yihiin caabbinta kor u kaca.
Guga waxaa ka wanaagsan inuu dhirta mustaqbalka abuuro bartamaha xilli - ilaa laga gaaro Abriil 20 ilaa 30.
Sida caadiga ah, geedka waxaa la beeray guga, marka cimiladu ay tahay mid diirran, oo hoos u dhigaysa heerkulka lama filayo. Waqtiga xajinta waxaa la doortaa dhammaadka bisha Maarso illaa bilowga Maajo. Waxay dhammaan ku xiran tahay aagga cimilada.
Waa muhiim! Hloo baahan yahay si ay u beeri geedo ka hor xilli sii kordhaya - in si kale loo dhigo, ka hor inta caleemaha Bloom inta lagu guda jiro.
Inta badan u beerashada isteroberi waxaa loo doortay booska ugu iftiimin leh ciidda qallalan oo caag ah. Tani waxay aad muhiim ugu tahay horumarinta mustaqbalka dhirta. Si aad u buuxsamayso buuxda, waxaa lagama maarmaan ah in la beero on aagga qoraxda dhowr nooc oo ubaxyada hal mar. Ku habboon hababka dheef-shiid kiimikaadka wanaagsan iyo horumarinta pear Substrate dabacsan oo aan u oggolaan biyo iyo hawo xad dhaaf ah, waxay ku haysaa qoyaanka aagga asalka ah.
Miraha waxay horumarin ku yeeshaan carrada taajir ah ee nafaqooyinka. Ha abuurin isteroberi ku yaalla dhulka hoostiisa. Meelahaas oo kale, inta badan heerkulka biyaha ayaa sarreeya, tanina waxay ka dambaysaa xilliga qaboobaha uu saameyn xun ku yeelan karo dhirta.
Pear ma jecla meelo mugdi ah oo aad u badan, sidaa daraadeed, dhirta yaryar, waa inaad isku daydaa inaad doorto meel si ay masaafada udhigto guriga waddanku ku dhowaad 3 mitir.
Waa muhiim! Nidaamka abuurka pear waa in uu u ekaado sidan: Masaafada saxda ah ee u dhexeysa geedo yar yar waa 5-6 mitir.
Tiknoolajiyada soo degitaanka
Beerto waxaa lagu fuliyaa godadka si gaar ah loo diyaariyey, kuwaas oo la qoday, iyada oo la tixgelinayo nidaamka xididka geedka: xididdada waa in si daacad ah loo dhigaa, iyada oo aan wax abuur ah. Wixii beeritaanka dayrta, qodo dalool 1-2 asbuuc. Guga - diyaariso dayrta.
Ma taqaanaa? Waxay ka fiican tahay dalagga, yar yar ee miro geedaha. Waxay badanaa ku badan yihiin geedo yar yar, sababtoo ah isteroberi ayaa la gooyaa sanad walba, iftiin iyo dib u soo kabashada taajaha.
Dhulka for geedo loo diyaariyey horay loo dhigay September iyo October. Ilaa 6 kiilo oo bacriminta dabiiciga ah ayaa loo isticmaalaa halkii mitir oo laba jibbaaran oo ciid ah, ilaa 60 garaam oo ah superphosphate caadiga ah, 15 garaam oo ah sulfate potassium. Bacriminta ayaa si siman loogu qaybiyey goobta oo dhan, ka dibna qoday maryo.
Ka hor inta aadan gelinin qoorta diyaarinta, waxaad u baahan tahay inaad si siman u qaybisid xididdada geedka iyo dusha sare ee ciidda, si qaybta sare ee xididada ay ahayd 5 sentimitir oo kor ku xusan heerka dhulka. Geeduhu waxay ruxruxaan dhowr jeer sidaas daraadeed ma jiraan xayndaab u dhexeeya xididka iyo ciidda.
Wixii ka badbaaday si deg deg ah ee seedling, ciidda nafaqo leh ayaa lagu daraa godka ay la socdaan humus, potassium sulfate iyo superphosphate. Meelaha leh cufan cufan ee dhexda ee fossa, waxaad ku dari kartaa ciid ku qalafsan.
Sida loo diyaariyo godka
Ceelka waxaa lagu qoday cabbiraha sida: 80 sentimitir ballaaran iyo 70 sentimitir qoto dheer. Qodobbada lagu dhejiyo derbiyada caarada ayaa la qaadayaa: lakabka bacrin ah ayaa lagu soo tuurayaa hal dhinac iyo dhoobada kale. Humus, sod leh dhulka sare, bacriminta waxaa lagu shubay godkii, iyo tuulo ayaa la abuuray. Humus iyo peat waxay ciidda ka buuxin doonaan nafaqooyinka waxayna kordhiyaan isku dheelitirka dareenka.
Pear Feeding waa faa'iido leh si ay u sameeyaan caawimo ah Bacriminta-nitrogen-ka kooban: HOL ama nitre, mararka qaarkood digaag diga ayaa sidoo kale loo isticmaalaa.
Haddii loo baahdo, ciidda geedo lagu daweeyo 500 garaam oo lime ah 1 mitir oo laba jibbaaran, iyadoo ku xiran hadhuudhka iyo ciidda. Qeybta ugu muhiimsan ee qiyaasta waxaa la soo bandhigaa xilliga dayrta, iyo inta kale - guga. Goobaha loo yaqaan 'saplings' ayaa la qodayaa oo dib loo buuxiyaa xilliga dayrta iyadoo la raacayo nidaam la mid ah geedaha tufaaxa.
Sida loo abuuro pear guga
Dhirta geed geedeed ma aha geedi-socod adag, haddii aad raacdo taxanaha saxda ah. Waxaa jira tallaabo gaaban oo ay ku bixinayaan talaabo ku saabsan sidii loo abuuri lahaa pear guga:
Ka qodo dalool kaas oo ku habboon xajmiga abuurka.
Ceelka waa in laga buuxiyaa bacriminta iyo humus, oo lagu qaso dhulka.
Marka xigta waa inay god ku ridaan daloolka.
Faafi xididada, geedka geed dalool.
Dabooli dhulka, si fiican u tuman, si aanay u dhaafin hawada.
Geedka ku jiid jeex jeex.
Kadib dhammaadka shaqada ugu weyn, god ayaa loo abuuray waraabka, iyo peat waa la shubay.
Pear waa la beeray meel u dhow meesha uu horey u soo baxey tubta, cherry ama cherry.
Tixgeli nidaamka degitaanka si faahfaahsan.
Waxaa lagama maarmaan ah in ay ka baxdo xarunta dhexe ee godadka diyaargarawga 30 cm, si ay u wadaan dhagax alwaax. Dareeraha waa in laga saaraa dhinaca koonfureed si loo ilaaliyo abuurka gubashada maalin gubasho. Intaa waxaa dheer, peg wuxuu sii adkeeyaa xasiloonida geedkii wali jilicsan oo leh dabayl xoog leh oo dabayl ah. Dhererkoodu wuxuu u dhexeeyaa qulqulka hoose ee sapling, qiyaastii 50 cm. Geedo ayaa lagu beeray meel u dhow hareeraha dhinaca woqooyi, dhammaan xididdadu si taxadar leh ayey u faafaan. Jooji carrada bacrin ah, si fiican u tamping. Markaad dhulka ku shubayso, waxaad u baahan tahay inaad ruxayso qoryaha si ay u noqoto mid si adag loo aasaasay, sidaas darteed waa arrin aad u adag in la jiido xoog isticmaalka.
Marka xigta, asliga ah ee warshadda waa in yar loo xiraa taageero. Samee dalool khafiif ah, oo si deeqsinimo ah u waraabiya biyo. Ugu dambeyn, waxaad u baahantahay inaad wareegto wareegga. Waa lagama maarmaan in la hubiyo in mulchadu ku wareegsan tahay xilliga oo dhan. Waxaad codsan kartaa digada dheeraadka ah, cawska iyo qajaar.
Cunto, doofaarka, lo'da, bakayle iyo digada faras ayaa loo isticmaali karaa bacriminta geedo.
Haddii ciidda ay hoos u dhacdo, waxaad u baahan tahay inaad ku shubto, maaddaama tani ay horseedi doonto hoos u dhaca xididdada. Beer beerta ah ee geedku wuxuu keenaa cudurrada pear, iyo xataa dhimasho.
Ka dib markii la beero geedo geedo yar yar ah, waxay abuurayaan dalool yar oo leh dhexroor ah 25 sentimitir, taasoo lagama maarmaan u ah waraabinta. Ka dib markii waraabiyo, daloolka waxaa lagu daboolay peat ama humus si loo ilaaliyo qoyaanka ciidda.
Nidaamka abuuritaanka geedo pear
Masaafada u dhexeysa dhirta tooska ah waxay ku xiran tahay saamiyada ay ku jirto pear-ka. Haddii geedka la isku daro saamiga koraya ee koraya, ka dibna beerto waa sida soo socota: 5 mitir u dhexeeya geedaha safka ah iyo 6 mitir u dhexeeya saf. Haddii la tallaalay semi-koob-guduud - qorshaha waxaa loogu talagalay 4 ilaa 5 mitir, cirifka - 3 ilaa 4 mitir. Bannaanka intiisa badani waxay sameeyaan geedo cagaaran oo cufan leh si ay u jiraan noocyo badan, laakiin marka pear ku kora, waxay leedahay saameyn xun xagga horumarka, waana inaad ka saartaa xad-dhaafka.
Ma taqaanaa? Ukumaha digaagga ee ceelka loogu talagalay beeritaanka muddo dheer waxay siin doonaan geedo yar yar oo nafaqo leh, sidaa daraadeed uma baahna in laga walwalo quudinta. Xaaladaha ba'an, ukumaha oo dhan waxaa lagu beddeli karaa qolof.
Dhamaanba daryeelka oo dhan geedo yar yar waxay u soo baxaan dhirta joogtada ah. Waxaad u baahan tahay inaad si taxadar leh u daawato sidaas darteed caws ma baabbi'in, oo tanina waa lagama maarmaan in la daboolo ciidda. Boogaha ayaa ah warshad taran oo loogu talagalay aphids, taas oo jecel inay cuno juice ee geedo yar yar. Sidaa darteed, waxaa muhiim ah in si joogto ah cawska ciidda ka dib waraabiyo.
Waxay noqon doontaa mid xiiso leh inaad barato sida loola macaamilo cayayaanka pear.
Sanadaha hore, geedka wuxuu u baahan yahay in la quudiyo, maadaama bacriminta uusan ku filnayn tan. Si ay ciidda ma qalajiyo oo ma yareeyo horumarinta ee seedling, geedka waxaa lagu daray waraabiyo kulul. Haddii geedka qorraxdu ka maqan tahay xagaaga, waxa uu bilaabi doonaa inuu hore u bislaado, miraha waxay noqon doonaan kuwo ka yar sidii ay noqon lahaayeen. Sidaa darteed, ha dayacin daryeelka oo raac talooyinka si aad u hesho goosashada tayo sare leh oo dhadhan fiican leh.